मोवाइल बजारलाई मर्यादित बनाउन हामी प्रतिवद्ध छौँ —दिपक मल्होत्रा,अध्यक्ष मोवाइल फोन इम्पोर्टस् एसोसिएसन – Maitri News
मोवाइल बजारलाई मर्यादित बनाउन हामी प्रतिवद्ध छौँ —दिपक मल्होत्रा,अध्यक्ष मोवाइल फोन इम्पोर्टस् एसोसिएसन
दिपक मल्होत्रा नेपाली व्यापारिक क्षेत्रका एक अनुभवी एवं स्थापित व्यक्तित्वको नाम हो । मोवाईल फोन आयातकर्ताहरुको छाता संगठन मोवाईल फोन इम्पोर्टस् एसोसिएसनका अध्यक्ष मल्होत्रा नेपालका लागि सामसङ मोवाईलका आधिकारिक बिक्रेता आईएमएसका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । यसै सन्दर्भममा उहाँसँग नेपाली मोवाईल बजारको विद्यमान अवस्था तथा यसको चुनौती एवं अवसरको बारे गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
हाल नेपाली मोवाईल बजार कस्तो गतिमा अगाडी वढिरहेको छ ?
आजको डिजिटल युगमा मोवाईल फोन संचारको अभिन्न अंगको रुपमा स्थापित भै सकेको छ । यहि सन्दर्भमा नेपालमा पनि मोवाईलको प्रयोग दुवै संख्यात्मक एवं गुणात्मक हिसावले तिब्र रुपमा वृदि भै रहेको छ । वढी भन्दा वढी नेपाली उपभोक्ताहरुले हाल ह्याण्डसेटलाई फोटो खिच्न, भिडियो गेम खेल्न, सामाजिक संजालका साइट चलाउन जस्ता अनेक प्रयोजनका लागि आत्मसाथ गरिरहेका छन । संचार र मनोरन्जन मात्र नभएर मोवाईल सेट नेपालमा पनि सामाजिक आर्थिक उन्नतीका लागि एक बलियो औजार सावित हुदैछ । त्यसैले के भन्न सकिन्छ भने मोवाईल बजार लगातार निरन्तर बिकास एवं विस्तार भै रहेको छ ।
प्रति वर्ष कतिको दरले मोवाईल बजार वृद्धि र्भइरहेको छ र यस बजारका अन्य महत्वपूर्ण पक्ष हरु के के हुन ?
जहासम्म मोवाईल फोनको वृद्धि दरको अवस्था छ यो प्रति वर्ष १० देखि १५ प्रतिशतको हारहारीले वृद्धि भैरहेको छ । प्रत्येक महिना बजारमा लगभग ५ लाख संख्यामा विभिन्न ब्रान्डका मोवाईल बजारमा बिक्री वितरण भै रहेको छ ।यसै गरि यि बिक्री भएका सेटहरु मध्ये ४५ प्रतिशत जति वारमेनु क्याटगोरीका फोन छन भने बाँकी ५५ प्रतिशत अंश स्माट फोन क्याटगोरीले ओगटेको छ । कुल बार्षिक २५ अर्व को कारोवार हुने नेपाली बजारमा सामसङ ब्राण्ड एक्लैले ५० प्र्रतिशत बजार हिस्सा ओगटन सफल भएको छ ।त्यसैगरी बाकि ५० प्रतिशत हिस्सा अन्य ब्रान्डहरु जस्तै हुवाई, ओप्पो, जियोनी, लेनेभो इत्यादीले समेटेका छन् । पहिले बजारमा धेरै प्रकार ह्यान्डसेटहरु उपलव्ध थिए अहिले आएर केवल ८–१० ब्रान्डहरुले मात्र बजारमा बर्चश्व कायम गरेको छन । उपभोक्ताले रुचाएका कारणले यि ब्राण्डहरुले आफुलाई बजारमा सवल र प्रभाकारी बनाउन सकेका हुन ।
भन्सार नतिरीकन अवैध रुपमा आयात गरिएका मोवाइल सेटले सम्पूर्ण मोवाईल समग्र बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको भन्निछ । यस बारे यहाँको बिचार के छ ?
अवश्य, नै १० देखि १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको ग्रे मार्केट नेपाली मोवाईल बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । चोरी निकाशी गरि भित्राईएका मोवाईल सेटका बारेमा कुरा गर्दा म सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण कुराहरु प्रष्ट्याउन चाहन्छु । करिव ८, ९ वर्ष अगाडी भंसार नतिरी आयत गरिएका मोवाईल सेटले ८० प्रतिशत भन्दा वढी बजार हिस्सा ओगटी रहेको थियो । यो अवस्थाले एकातिर सरकारले राजश्वको दृष्टिकोणले ठूलो रकम गुमाईरहेको थियो भने अर्को तिर आधिकारीक मोवाईल सेट आयातकर्र्ताको व्यापारमा गिरावट आईरहेको थियो । यसै गरि ग्रे मार्केटको कारणले आम उपभोक्ताको सक्कली समान प्रयोग गर्न पाउने अधिकारलाई पनि कुन्ठीत गरिरहेको थियो । यि समस्यालाई मध्ये नजर गरेर हामी आधिकारिक मोवाईल आयातकर्ताहरुले सरकार सामु मोवाईल सेटमा भसार शुल्क शून्य गर्ने माग राख्यौ । र सरकारले पनि हाम्रो माग लाई पुरा गर्दे भसार शूल्क शून्य गर्दै आयातकर्ताहरुले तिरेको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर को ६० प्रतिशत ६ महिना पछि फिर्ता गर्ने व्यवस्था पनि ग¥यो । यो कदमले गर्दा ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको ग्रे मार्केट २० प्रतिशतमा झ¥यो । हाल १० देखि १५ प्रतिशतको हारहारीमा रहेको ग्रे मार्केटलाई शून्यमा झारनु आवश्यक छ र यसको लागि हाम्रो संगठनले निरन्तर पहल गरिरहेको छ ।
के कस्तो प्रकारको पहल संगठनले गरिरहेको छ, यस बारे कृपया, प्रकाश पारि दिनुहोस् ।
मोवाईल सेटको चोरी निकाशी पूर्ण रुपमा निरुत्साहीत गर्न सरकारले व्हाईट लिष्ट लागू गर्न नितान्त आवश्यक छ । यो लागु भएपछि नेपालमा आधिकारिक तवरबाट आयातित हुने सम्पूर्ण मोवाईल सेटको आईएमईआई नम्बरई नेपाल दुर संचार प्राधिकरणले संग्रह गरी उक्त नम्बरलाई दुर संचार प्रदायक संस्थाहरुलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । यस पछि यस्ता संस्थाहरुले आफुले प्राप्त गरेको आईएमईआई नम्बर आफ्रनो प्रणालीमा इन्ट्री गरि उक्त नम्बर संग मेल खाने मोवाईल सेटहरुलाई मात्र एक्टीभेट गर्न सक्ने प्राविधिक व्यवस्था मिलाउन सक्छ । यसो भएको खण्डमा अवैध तरिकाले भित्राईएका ह्याण्डसेन्ट प्रयोग गर्न सकिदैन र ग्रे मार्केट आपसे आप शून्यमा झर्न सक्दछ ।ग्रे मार्केटमा उपलव्ध मोवाईल फोनमा कम गुणस्तर युक्त ब्याट्री, एडप्टर जस्ता सामान प्रयोग हुने हुदा ह्याईट लिष्ट लागू भए पछि उपभोक्ताहरुको हित समेत संरक्षण हुन सक्छ ।
ह्याईट लिष्ट बाहेक तपाईको संगठनले अन्य कस्ता रणनिति÷कार्यक्रम अपनाउदै छ ?
नेपाली ह्याण्डसेट बजारलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउन हाम्रो संगठन पूर्ण रुपमा प्रतिवद्ध छ । हाम्रो अर्को रणनिति भनेको बजारमा गुणस्तरको नयाँ बेन्चमार्क स्थापित गर्नु हो । यसको लागि हामीले एक अभियान नै थालनी गर्ने योजना बनाउदै छौं । यस अभियान अन्तर्गत आधिकारिक आयातकर्ताद्वारा भित्राईएका मोवाईल सेटमा मोवाईल फोन इपोटर एसोसियसन र नेपाल दुर संचार प्राधिकरणको सयुक्त लोगो अंकित स्टिकर टासिने छ । यस्तो स्टिकर एसोसियसन संग आवद्ध भएका एवं नभएका दुबै प्रकारका आयातकर्ताले ल्याएको ह्याण्डसेटमा टासिने व्यवस्था मिलाईने छ । यस स्टिकरको टास्ने प्रावधानले बजारमा पाईने हरेक मोवाईल सेटको गुणस्तर निरुपन गर्ने हुदा यसले आम उपभोक्ताहरुमा सचेतना जगाई नेपाली मोवाईल बजारलाई मार्यादित बनाउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ ।
अर्को तर्फ यस संगठनले बजारमा व्याप्त अवस्थ प्रतिस्पर्दालाई न्यूनिकरण गर्न एमओपीको व्यवस्था गर्ने गृहकार्य गर्दै छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि खुद्रा बिक्रेताहरुले मनोमानी मूल्य राखि मोवाईल फोन उपभोक्तालाई बिक्री गर्न पाउने छैनन् । यदि यसो भएमा मोवाईलको मूल्यमा एकरुपता आई यसले सिङ्गो ह्याण्डसेट बजारलाई नै व्यवस्थित गर्न सक्दछ ।